Ulande izinkomo zelobolo onengoduso "eyisoka" - Ilanga News
Home Izindaba Ulande izinkomo zelobolo onengoduso “eyisoka”
Ulande izinkomo zelobolo onengoduso “eyisoka”
Kuthiwa ithe izowukhokha yona no-R35 000 abeselobole ngawo
YIZINKOMO zamabheka ebesezilandiwe emuva kokutholakala ukuthi ingoduso “iyajola”.
UTHELEKE ngechilo umndeni wowesifazane waseShiyane, eDundee izolo ngeSonto owesilisa waseMthwalume elanda amabheka emuva kokuthola ukuthi kukhona abanye besilisa abamudla izithende engodusweni yakhe, obekumele ashade nayo nonyaka.
Ubezikhotha amanxeba izolo uMnu Sithembiso Gambushe, esuka eShiyane nenqola ethwele lezi zinkomo emuva kokuba kuvele ukuthi ingoduso yakhe inamashende amabili echitha isikhathi sayo nawo uma yena engekho.
ILANGA lixoxe noMnu Gambushe esemgwaqweni edonsa inqola ebinezinkomo ezine abezilande ekhweni, ehamba nabafowabo.
Ubezwakala ekhuluma nje ukuthi yize noma esamukela lesi simo, kodwa uphoxekile njengoba ethe ubengakaze azitshele ukuthi angehlelwa yinto enjengalena ajwayele ukuyibona emafilimini.
Uthi yena nengoduso yakhe, baqala ukuthandana eminyakeni ewu-5 edlule, ngo-2018 waqala wayocela isihlobo esihle ekhweni, bathola nomntwana okumanje uneminyaka emibili.
Ngasekuqaleni kwalo nyaka uthi uhambile wayoqedela ukulobola ngezinkomo ezine, washaya phansi no-R20 000.
“Kube sekuvunyelwana-ke ukuthi ngoNcwaba (August) wangalo nyaka zizowushaya, kodwa kwavimba ukuvalwa kwezwe. Sihlehlisele ngasekuqaleni konyaka ozayo ngoba kuyimanje nje, besimatasa sesiqala amalungiselelo,” kusho yena.
Uthi kushintshe isimo ngoMandulo (September), lapho ethi uthole umyalelo kuFacebook (inbox) obuvela kowesilisa obemtshela ukuthi makahlukane nengane yakhe.
“Lona wesilisa (esho embiza ngegama), ungitshele ukuthi noma ngabe ngenzani nengoduso yami, kodwa mangihlukane nengane yakhe. Ngivele ngamangala ngoba phela ngokwazi kwami, ngeyami leyo ngane abethi ngeyakhe futhi seyenzelwa usiko nasekhaya.
“Ngithe uma ngimbuza unina wengane ukuthi lona wesilisa ukuthathaphi lokhu akushoyo ngoba ingane ineminyaka emibili, kanti thina sesithandane iminyaka ewu-5, wavele waphika konke,” esho.
Uthi ngisho indlela aphike ngayo kayehlanga kahle kuyena ngoba uvele wayenza ihlaya nje, wathi lona wesilisa wayethandana naye kudala. Uqhuba athi ubesezitshela ukuthi uzothola indlela azokwenza ngayo ulibofuzo, okuthe emasontweni amabili edlule wathola umyalezo obuvela kowesifazane obemtshela izindaba ezishintshe impilo yakhe unomphelo.
“Lona wesifazane (emgagula ngegama), ungitshele ukuthi ungowaseNquthu, ufuna ukungazisa ukuthi ngempelasonto edlule emzini wakhe, bekufike ingoduso yami iyokwethulwa kuye ngumyeni wakhe njengenkosikazi yesibili,” kusho yena.
Uthi ubuzisisile kulona wesifazane efuna ukulandelela ukuthi ngabe bakhuluma ngomuntu oyedwa. Utshele ILANGA ukuthi kuvelile ngesikhathi lona wesifazane ethulwa ukuthi bekumele ngabe ushadile ngoNcwaba, kodwa umshado kawusekho ngoba uhlukene nomuntu abethandana naye.
UMnu Gambushe uthi uqonde kuyona ingoduso yakhe wayibuza ukuthi kwenzekani nakhu ethola imibiko yokuthi beyiyokwethulwa emzini wenye indoda njengenkosikazi yesibili.
“Nalapho uqale waphika walala ngomhlane, ngabe sengimthumelela ubufakazi benkulumo yami nalona wesifazane okuthe nginga-kaqedi ukukhuluma naye, lona wesifazane wathi sengimqhathe nendoda yakhe, iyabuza ukuthi ukhulumeleni nami,” kusho yena.
ILANGA lizibonele inkulumo yeWhatsApp, ephakathi kukaMnu Gambushe nengoduso yakhe lapho ibikhombisa khona ukumduba, yathi kayizimisele ngokulokhu iphendulana naye, kungcono bahlukane, makalande izinkomo zelobolo.
UMnu Gambushe ubesebuza ukuthi angafika nini nokuthi izinkomo kazihambi zodwa kepha kunemali okumele zihambe nayo, lona wesifazane wathi uzokhuluma nomndeni wakhe.
Uzilandile izinkomo izolo, uthi ingoduso ithe izoyikhokha yona imali ewu-R35 000 abeseyi-khokhile.
“Ngithe uma sengilandelela, ngathola ukuthi yinto eyaziwayo nje endaweni ukuthi ingoduso yami inabantu ethandana nabo uma ngingekho.
“Ngibonga ukuthi nabantu bayo kabangilimazanga ngoba phela bengiyivakashela kabili ngenyanga, ngilale khona. Ngibonga nokuthi kangiyena umuntu onodlame ngoba ngiyazi ukuthi omunye umuntu besizomehlula lesi simo,” kusho yena.
“Kuze kube yimanje, uthi akazi noma ingane ngeyakhe noma nge-yalona omunye umuntu wesilisa njengoba ingoduso yakhe inqabile ukuba benze ulibofuzo yathi makayeke nokuyondla, izozikhuli-sela.
“Ngizoma ukondla ingane kuze kube kwenziwa ulibofuzo, uma kungeyami ngizoqhubeka nokuyondla, uma kungeyona eyami ngizocela babuyise imali ebengiyondla ngayo,” kusho yena.
“Ingaphezulu kuka-R70 000 imali ebese ngiyichithile kodwa futhi nakhona ngiyabonga ukuthi kuphele kusekusona lesi sigaba. Ngiyaqonda nokuthi lokhu okwe-nzeka kimina kuyimpilo nje, kayi-kho into ebengingayenza ukukugwema,” kusho yena.
ILANGA lishayele ucingo lukaninakhulu wengoduso, lwabanjwa ngowesifazane osemusha othe akekho.
Uthe uma ebuza ukuthi ukhuluma nobani watshelwa ukuthi yintatheli yelanga,wavala ucingo.
Ucingo lwayo ingoduso belukhala ilubambe bese iyaziphika kanti nolwalapho isebenza khona ehhotela eliseDundee, lubanjwe kwathiwa kayikho emsebenzini.
Previous articleZiphezulu izibalo zabahaqwa yi-Covid
Next articleSebeqalile ukufundisa u-Matric ka2021 i-Maths ne-Accounting